सरकारले घर बनाइदिए मात्रै घरबेटीले भाडा छुट दिने !
सरकारले घर बनाइदिए मात्रै घरबेटीले भाडा छुट दिने ! भाडा नतिरेकाे भन्दै डेरावालकाे खानेपानीसमेत बन्द गर्न थाले
रमेश भारती काठमाडाैं, २७ वैशाख
सामान्य काम गरेर अध्ययन र डेरा खर्च जुटाउँदै आएका लमजुङका सिदार्थ थापा काठमाडौंकाे घटेकुलोमा बस्छन् । उनी ३ वर्षदेखि सिभिलमलमा काम गर्दै आएका थिए । लकडाउनका कारण ११ चैतदेखि उक्त मल बन्द भएपछि उनी कोठामै बसेर दिन काटिरहेका छन् ।
काम नभएपछि पैसा हुने कुरै भएन, पैसा नभएपछि उनले डेरा भाडा तिर्न सकेका छैनन् । भाडा नदिए निस्केर जान घरभेटीले भनिरहेका छन् ।
भाडाका विषयमा २ हप्तायता घरबेटीसँग विवाद भएकाे उनी बताउँछन् ।
सरकारले लकडाउन भएको समय अर्थात् चैत महिनादेखिको घरभाडा छुट दिनु भनेको छ हाेइन र ? भनेर सोध्दा उनले घरभेटीबाट प्रतिप्रश्न झेल्नुपरेकाे छ, ‘यो घर सरकारले बनाएको हो ? मलाई सरकारले के दिएको छ ? घरअगाडि वर्ष दिनअघि भत्किएकाे बाटाे अहिलेसम्म बनाएकाे छैन । दुई महिनाको भाडा छुट दिइँदैन । बरू ज्यान फाल्ने हो, भाडा छुट हुँदैन् ।’
वास्तवमा यतिबेला उनीसँग डेराभाडा तिर्न त परकै कुरा भयाे, काेठामा २ छाक पेटभरी खाने अन्नसमेत छैन । ‘राहत माग्न जाउँ भने ज्यालादारी श्रमिक हो भनेर प्रश्न गर्छन् । काम गर्ने अफिसले नो वर्क नो पे भनेर जानकारी गराएको छ । काम पनि छैन, पैसा पनि छैन । चैतदेखि पैसा नभएका कारण राम्रोसँग खान पाएकाे छुइनँ’, उनले भने, ‘मैले भोगेको दुःख कसलाई भन्नु होला ? गाउँमा आमाबुवाको आयस्रोत कृषि हो । अहिले दूध र तरकारी बिक्दैन । म यहाँ शहरमा थुनिएकाे छु, भोकले मेरेको कसैले देख्दैन ।’
उनी बस्ने एउटा काेठाकाे मासिक भाडा ७ हजार रूपैयाँ छ ।
दरबारमार्गको एक ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्दै आएकी पोखराकी ललिता गुरुङ (नाम परिवर्तन)को समस्या पनि समस्या उस्तै छ । ललिता काम गर्दै फेसन डिजाइनिङ अध्ययन गरिरहेको बताउँछिन् ।
उनकाे घरबेटीले पनि सरकारले घर बनाइदिएकाे भए पाे छुट दिनु भन्दै भाडा नदिए घरबाट निकालिदिने धम्की दिएकाे उनी बताउँछिन् ।
महिनेपच्छिे भाडा तिर्दा दिदीबहिनीको जस्तो सम्बन्ध अहिले शत्रुको जस्तो भएको उनले सुनाइन् । ‘बिहान उठनेबित्तिकै घरबेटीले नानी घरबाट पैसा आयो ? भनेर प्रश्न गर्छन् । म जब टाउको हल्लाएर छैन भनेर इसारा गर्छु, घरबेटी रिसले चुर हुँदै आँखा तर्छन् र भूतभुताउँदै हाम्रो घर सरकारले बनाएकाे चौताराे हो र भन्दै फर्किन्छन् । म केही नभनी चुपचाप बस्छु ।’ उनले भनिन्, ‘कोठामा चामल छैन, राहत मागााैं भने दिने कोही छैन । स्कुटर र ल्यापटप छ । कसले किन्ला ? खाने खर्च पनि छैन । अब के गर्नु भन्ने चिन्ताले पराेलिरहेकाे छ ।’
उनले अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएकाे बताइन् । अहिलेसम्म जसाेतसाे धाने पनि अबचाहिँ ठूलै संकटकाे नजिक अाइपुगेकाे उनकाे भनाइ छ ।
काम नभएपछि साहुले फोन पनि उठाउँदैन । के गर्नु, घर जान सक्ने अवस्था पनि छैन , उनले दुःख पाेखिन् ।
उनी सेतोपुल नजिकैकाे घरमा एउटा सानो कोठा र किचनको गरी मासिक ९ हजार रूपैयाँ भाडा तिरेर बस्छिन् ।
बाग्लुङकी दीपा कँडेलकाे समस्या त अझै जटिल छ । २ महिनाकाे भाडा नतिरेकाे भन्दै घरबेटीले धाराको पानी बन्द गरिदिएका दीपा बताउँछिन् । ‘सरकारले छुट दिने भनेर मख्ख परेर बसेकी हाैली नानी, जाउ भाडाबापतकाे पैसा मागेर ल्याउ । मबाट छुट हुने कुरै छैन । सक्दैनाैं भने काेठा खाली गर, पैसा हुने मान्छे आएर बस्छन् । राम्रो मुखले भन्दा भएन भने प्रहरी लगाएर कोठाबाट निकाल्न पर्ला , घरबेटीकाे धम्कीपूर्ण भनाइ उद्धृत गर्दै दीपाले भनिन् ।
२ महिनाको नभएर एक महिनाको मात्र भाडा छुट दिए पनि ठुलो राहत मिल्ने उनी बताउँछिन् । एउटा कोठाकाे ८ हजार भाडा तिर्ने गरेको उनले बताइन ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरू जस्ता हजाराैं मानिस लकडाउनका कारण भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यीमध्ये कतिपय त भाेकाे पेट बस्न बाध्य छन् । सरकारकाे राहत समेत पाएका छैनन् । सरकारले भाडा छुटकाे विषयलाई सेन्टिमेन्ट क्याच गर्ने माध्यम बानाएकाे उनीहरूले बझेका छन् । तर, संकटका बेला सरकार जिस्किएकाे उनीहरूलाई फिटिक्कै मन परेकाे छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस भाडामा बस्ने गरेको तथ्याङ्क छ । देशघर १७ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको जनगणनाले औँल्याएको छ । हाल घरभाडामा बस्ने दर बढेर २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । घरबहालमा लिने/दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, २०२० मा घर बनाउनेको ८ र ९ नम्बर बुँदामा व्यवस्था गरेको थियो । तर, यो ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार छ । घरभाडामा लगाएको रकम प्राय: घरवाला कर छल्दै आएका छन् ।
प्राय: घरधनीले बहालमा बस्न आएकालाई कुनै लिखित सम्झौताविना नै घर भाडामा लगाउँछन् । सम्झौता नभएपछि कर तिर्नुपर्ने र बहाल रकम पनि मनपरी लिन मिल्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २७, २०७७, १२:१७:००